अर्थ Archives - Page2of 13 - Suvham News
Oct52017 by gsmktmNo Comments
नेपालमा शेयर बजार- सागर नाथ तिवारी
नेपालमा धितोपत्र (शेयर) बजारको इतिहासमा झन्डै चार दशक लामो छ । देशको पुँजीलाई प्रयोग गर्न र त्यसको सदुपयोग गर्ने हेतुले वि.स. २०३३ साल आषाढ १२ गते सेक्युरिटि खरिद बिक्रि केन्द्रको स्थापना भयो । यो केन्द्र वि.स. २०५० जेष्ठ १३ गते नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको रुपमा परिणत भया े। यसपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्स) ले धितोपत्रको औपचारिक खरिदविक्रि भने वि.स. २०५० माघ ३० गतेबाट भयो । यसका साथै नेप्से परिसुचकको समेत गणना सुरुभयो । स्थापना कालमा २५ जना दलाल र ५ वटा बजार प्रबन्धक बाट काम सुरु गरेको थियो । उपत्यका बाहिर पोखरा, नारायणगढ, बुटवल र धनगढी, बिरगंज, धरान र बिराटनगरबाट पनी शेयर किनबेचको प्रबन्ध मिलाएको छ । नेपालगंजबाट पनि यसको सेवा छिटै सुरु हुदै छ । स्टक एक्सचेन्जमा कारोबारका लागि २३० भन्दा बढि कम्पनीहरु सुचिकरण भएका छन् । हरेक वर्ष सुचिकरण भएका कम्पनीहरुको नविकरण र वर्गिकरण
Oct22017 by gsmktmNo Comments
दशैंलगत्तै १६ अर्बको सेयर निष्कासन हुँदै
१६ अर्बबराबरको सेयर निष्कासन अनुमति माग्दै विभिन्न कम्पनी धितोपत्र बोर्डको प्रक्रियामा छन् । १८ वटा कम्पनीले प्राथमिक सेयर (आईपीओ/एफपीओ) निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन् । सबैले अनुमति पाउँदा तीन अर्ब ४१ करोडको सेयर बजारमा आउने छ । तीमध्ये १० वटा संस्था जलविद्युत् क्षेत्रका छन् । रसुवागढी हाइड्रो, बुटवल पावर, साञ्जेन, आँखुखोला, गर्जाङ, जोशी, लाफिङ बुद्ध, युनिक हाइडेल, सीईबीडी हाइड्रो, कालिका पावर, युनियन, राधी विद्युत्, सुभम् पावर र पञ्चकन्यामाई नामका जलविद्युत कम्पनी सेयर निष्कासनको प्रक्रियामा छन् । यस्तै, प्रिमियर इन्स्योरेन्स र एनएमबी बैंकले थप एफपीओ जारी गर्न लागेका छन् । यस्तै, १२ अर्ब ९४ करोडबराबरको हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि १८ वटा कम्पनी प्रक्रियामा छन् । सिभिल, प्रभु र सिद्धार्थ बैंकले हकप्रद जारी गर्न लागेका हुन् । गुराँस लाइफ, एसियन लाइफ, प्रुडेन्सियल र एभरेस्ट इन्स्यो
Sep192017 by gsmktmNo Comments
विदेशबाट नेपाल फर्किंदै हुनुहुन्छ ? यी सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क तिर्नु पर्दैन
तपाईं विदेशबाट दशैैं मनाउन घर फर्किंदै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि सामान ल्याउनु हुनेछ । किनभने तपाईंले विदेश जाँदा वा विदेशमा रहँदा घरपरिवार, आफन्त र साथीभाई विभिन्न सामान ल्याइदिने बाचाा गरिसक्नु भएको हुन्छ । त्यसैले विदेशबाट घर फर्किँदा सुडकेश भरिउञ्जेल सामान ल्याउने दबाब हुन्छ तपाईंलाई । तर, के आफूले चाहेका र चाहेजति सामान विदेशबाट नेपाल ल्याउन पाइन्छ त ? अहँ पाइन्न । नेपाल सरकारको कानूनले प्रतिबन्ध गरेका सामान बोकेर आउनुभयो भने त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमै तपाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गर्छ । अनि के कानूले प्रतिबन्ध नगरेका वस्तुचाहिँ मनलाग्दी ल्याउन पाइन्छ त । अहँ त्यो पनि पाइँदैन । सरकारले एक व्यक्तिले यतिभन्दा बढी सामान ल्याउन नपाइने भनेर तोकिदिएको हुन्छ । त्कतिपय सामनहरुमा भने सरकारले भन्सार नै लिँदैन । त्यसैले विदेशबाट नेपाल आउँदा भन्सार तिर्नुनपर्ने सामान ल्याउनु भयो भने तपाईंला
Sep182017 by gsmktmNo Comments
एनआईसी एसिया बैंकले गर्यो वित्तीय सचेतना र्याली
एनआईसी एसिया बैंकले सोमबार ३१ गते सर्वसाधारणमा वित्तीय सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बृहत् वित्तीय सचेतना र्यालीको आयोजना गरेको छ । बैंकको कमलादी शाखाबाट सुरु भएको उक्त र्याली काठमाण्डौंको विभिन्न मुख्य स्थानहरुको परिक्रमा गर्दै पुनः कमलादी शाखामा पुगेर समापन भएको थियो । र्यालीमा बैंकको ६०० भन्दा बढी कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले हाल ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप ग्राहक, २८ हजारभन्दा बढी कर्जा ग्राहक ३ लाख ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी डिजिटल बैंकिङ्ग ग्राहकहरुलाई देशभर रहेका आफ्ना १ सय २८ शाखा एवं विस्तारित काउन्टर मार्फत् उच्चस्तरिय र ग्राहक केन्द्रित सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले सदैव आफ्ना ग्राहकहरुको सर्वोपरि हितलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै विभिन्न आकर्षक, लाभदायी तथा ग्राहक केन्द्रित बैंकिङ्ग सेवा तथा सुविधाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले आफ्ना ग्रा
‘दसैंं तिहारको बहार ताम्राकारमा मोबाइल किन्दा उपहार नै उपहार’
न्यूरोडस्थित ताम्राकार मोबाइल कम्प्लेक्समा मोबइल महोत्सव सुरु भएको छ । ‘दसैंं तिहारको बहार ताम्राकारमा मोबाइल किन्दाउ पहार नै उपहार’ योजना अनुरुप मेल सुरु गरिएको हो । ताम्राकार मोबाइल बजारले मेला अवधिभर मोबाइलको मोडल हेरेर ५ देखि ६० प्रतिशतसम्म छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । सामसुङ एस फोर र एस फाइभमा ६० प्रतिशत, डिटिसी टचमा ६० प्रतिशत, हुवावे अनर होलीमा ४० प्रतिशत छुट दिइएको बताउँदै ताम्राकार मोबाइल कम्प्लेक्सका सचिव गुरुदत्त शर्माले लेनेभोको सबै मोडलका मोबाइलको खरिदमा ३० प्रतिशत छुटको ब्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । ताम्राकार मोबाइल बजारमा न्यूनतम ९ सयदेखि १ लाख ३० हजार रुपैयाँ सम्मका विभिन्न ब्राण्डका मोबाइल सेट उपलब्ध भएको बताउँदै मोबाइल कम्प्लेक्सका कोषाध्यक्ष अनिल ढकालले मोबाइल बजारमा दसैंंका बेला दिइने आन्तरिक अफरसँगै कम्पनीहरुले ल्याएका अफर तथा उपहार पनि उपभोक्ताले पाउने जानकारी दिनुभ
Sep12017 by gsmktmNo Comments
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)मा लोकतान्त्रिक समुहबाट प्यानल सहित अध्यक्षमा पुष्पराज आचार्य निर्वाचित
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)का अध्यक्षमा पुष्पराज आचार्य निर्वाचित भएका छन्। यहाँ आज सम्पन्न १८ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचन कार्यक्रमबाट ११८ मतका साथ आचार्य विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी मोदनाथ ढकालले १०६ मत प्राप्त गरे । यस्तै उपाध्यक्षमा प्रभात भट्टराई १३७ मतका साथ विजयी भए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रामराजा श्रेष्ठले ८८ मत पाए। महासचिवमा भीमप्रसाद गौतमले १०६ प्राप्त गरी विजयी हुँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी जनार्दन बरालले ७० र अर्का उम्मेदवार अनुजराज ढुंगेलले ४९ मत प्राप्त गरे । सचिव सुजन ओलीले १३० मत पाएर विजयी हुँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी नवीन अर्यालले ९२ मत प्राप्त गरे । कोषाध्यक्षमा भागवत भट्टराईले १२३ मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा प्रतिद्वन्द्वी सरस्वती ढकालले ९८ मत प्राप्त गरे। त्यसैगरी सदस्यमा एलिजा उप्रेती (१५७), हिमाल पौडेल (१४५), सागर घिमिरे(१२८), कृष्ण रिजाल (
Aug212017 by gsmktmNo Comments
नेता जि हरु व्यापार घाटा ९ खर्ब १७ अर्ब , हजुरहरु प्राडो , पोजेरो मात्र चड्ने कहिले सम्म?
गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालबाट ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान विदेश निकासा हुँदा देशमा ९ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान भित्रिएको छ । गत वर्ष निर्यातको तुलनामा आयात बढ्दा देशको व्यापार घाटा ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा भारतसँग रहेको छ । भारतसँग ५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा भएको हो । चीनसँग यस्तो व्यापार घाटा १ खर्ब २५ अर्ब रहेको छ भने अन्य मुलुकसँग १ खर्ब ९९ अर्ब रहेको छ । रेमिट्यान्स भित्रने दरमा आएको सुस्ति र निर्यात बढेको कारण देशको शोधानान्तर बचत पनि घटेको छ । अघिल्लो आवमा १ खर्ब ४० अर्ब नाफामा रहेको चालु खाता गत आवमा भने १० अर्ब १३ करोडले घाटामा गएको छ । अघिल्लो आवमा १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ शोधानान्तर बचतमा रहेको गत आवमा भने घटेर यस्तो बचत ८२ अर्बमा सिमित छ । नेपालको कुल गाहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा व्यापार घाटा ३५ प्रत
Aug152017 by gsmktmNo Comments
सबै स्थानीय तहमा बैंक नखोल्नेलाई कारबाहि,खोल्नेलाई प्रोत्साहन-नेपाल राष्ट्र बैंक
सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । बैंकले मंगलबार एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै बैंक नभएका स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने बैंकले प्रोत्साहन गर्ने र त्यस्ता स्थानमा शाखा नखोल्ने बैंकहरुलाई कारबाही गर्ने जानकारी दिएको छ । ‘संघीय संरचना अनुसार तय भएका ७४४ स्थानीय तहमध्ये २०७४ असार मसान्तसम्म बाणिज्य बैंकको शाखा नरहेका स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकले अनिवार्य रुपमले शाखा खोल्नु पर्नेछ, विकास बैंकहरुले बाणिज्य बैंक र विकास बैंक दुबै नरहेका स्थानीय तहमा शाखा खोल्न सक्नेछन्,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । यो ब्यवस्था अनुसार शाखा खोल्नको लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति भने नचाहिने भएको छ । बैंक संचालक समिति आफैले शाखा खोल्ने निर्णय गरेर शाखा खाली सकेको ३ दिनभित्रमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिदा हुने ब्यवस्था गरिएको छ । यसरी तोकिए
Aug12017 by gsmktmNo Comments
सुमार्गीले ३ अर्ब राजश्व तिरेनन?
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि (हलो नेपाल)ले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर छलेको छ । ०६९ सालमा भएको कारोबारवापतको लाभकर तिर्न उक्त कम्पनीले अटेर गर्दै आएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५४औं प्रतिवेदन (आव ०७२/७३)मा उक्त रकम तत्काल असुल गर्न आन्तरिक राजश्व कार्यालय काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ लाई निर्देशन दिएको छ । उक्त रकमको मूल्यांकनसमेत हालसम्म भएको छैन । सोही कारण छलिएको करको परिमाण यकिन हुन सकेको छैन । महालेखाको प्रतिवेदनले मूल्यांकन गरेर कर असुल्न निर्देशन दिएको छ । उक्त कम्पनीले साविक मध्यपश्चिमाञ्चल (हाल प्रदेश ५ र ६)का १५ जिल्लामा हेल्लो नेपाल नाममा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्छ । उक्त कम्पनीले सेयर खरीद–बिक्री गर्दा भएको नाफावापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने लाभकर छलेको हो । त्यसलाई महालेखाले बेरुजु शीर्षकमा राखेको छ । कार्यालयका अनुसार उक्त कम्पनीको बेरुजु रकम एनसेलपछिको